You na-ede ihe site na ebe a na-asa ihe? | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 20, 2011 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Ohere dị mma na ị na-eme ederede site na ime ụlọ ịwụ… n'eziokwu 2 n'ime ndị 3 kwetara na-eme ya. Ọ bụ ụdị nke na-eme ka m chee echiche banyere ịgbaziri mmadụ ekwentị ekwentị ugbu a! Anyị na-ekele ya mgbe ndị ahịa anyị jiri ọrụ izi ozi ederede anyị thank mana ekele ịdị mma ha na-abụkarị na mpụga nke a ụlọ maka ọrịre! Banyere 2 / 3rds nke gị… Enwere m olileanya na unu niile nwere ihu mmetụ aka na akụkụ nke ọzọ nke atọ nwere ahụigodo.
Banyere gị ndị na-ezipụ ihe nkiri na ihe nkiri nkiri… ee, anyị na-ahụ gị. Achọrọ m ịma ihe kpatara na ụlọ ihe nkiri anaghị etinye ndị na-egbochi ekwentị mkpanaaka. Aga m akwụ ụgwọ ihe nkiri ma ọ bụrụ na anaghị m anụ ụda ụda mmadụ Justin Bieber! Daalụ ndị bekee na Tatango maka mkpọtụ… Aga m asa aka m ugbu a.
Gịnị Bụ Echiche Banyere Uru Gị?
Ọkt 20, 2011 na 5:29 PM
Ọkt 20, 2011 na 5:57 PM
Daalụ maka ikenye anyị infographic!
Ọkt 24, 2011 na 2:33 PM
dị mma, m nọ na 1/3 nke na-anaghị eme ya mgbe ị na-eme ọnụọgụ abụọ 2. anyị pụrụ iche dịka nke ahụ